[Isihleli] ITunisia: Rached Ghannouchi, ukukhetha okungalungile - JeuneAfrique.com - Thumela RELAY
Accueil » INQUBOMGOMO [Isihleli] ITunisia: Rached Ghannouchi, ukhetho olubi - JeuneAfrique.com
[Isihleli] ITunisia: Rached Ghannouchi, ukukhetha okungalungile - JeuneAfrique.com
TELES RELAY 20 November 2019
Le mercredi 13 novembre 2019 restera comme une date fatidique pour la Tunisie. Ce jour-là, dans ce pays africain et méditerranéen de 11,5 millions d’habitants, a été élu à la présidence de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Rached Ghannouchi, chef des islamistes du pays.
URached Ghannouchi manje akekho emaphethelweni akhe kepha enhliziyweni yamandla. Futhi, empeleni, iminyaka emihlanu. Le ndoda i-78 iminyaka, ihlakaniphile futhi iyinqolobane, uyenqaba ukuzwakalisa ngolimi olungelona olwesi-Arabhu, futhi aluphethe kahle. Yize ehlale eLondon cishe iminyaka engamashumi amabili, akasikhulumi kahle nesiNgisi. Abalingani bakhe bafunde ukusebenzisa isiFulentshi ukuxhumana nabangaphandle, kepha uyenqaba. Osomabhizinisi abagunyaziwe eTunis nabanye abantu bezinye izizwe baxhumana naye kuphela ngotolika.
Wakhulela eBrithani, izingane zakhe zikhuluma kahle isiNgisi, kuyilapho yena uqobo egxile kumaqhinga, uyindoda yekhulu leshumi nesishiyagalolunye isidluliselwe eTunisia namuhla. Ngaphansi kwe-tutelage, kuthiwa, ngoRepep Tayyip Erdogan, othi ungumholi ophakeme wamaSulumane, lowo "I-Muslim Brotherhood" yaseGibhitheuzimisele ukuvikela izintshisekelo zeqembu lakhe, i-Ennahdha, kunalezo zaseTunisia. UHabib Bourguiba, ubaba wenkululeko, umsunguli weRiphabhlikhi kanye nesimanje sezwewasebenzisa zonke izindlela, kubandakanya nezentando yeningi, ukwenza la madoda angasebenzi.
Ukucindezelwa kwekhulu leminyaka
Umlandeli wakhe, uZine el-Abidine Ben Ali, wenze okufanayo, kodwa futhi ngesihluku esikhulu: namuhla kufanele baphenduke emathuneni abo lapho bezwa izindaba ukuqokwa kukaRached Ghannouchi esikhundleni sokuba ngumongameli wePhalamende laseTunisia.
Kusho ukuthi amaSulumane aseTunisia, abedinga ozakwabo ku2011 ukuthi bangene ngemishini yombuso futhi abeke iTunisia uhlelo lwePhalamende e2014, ekugcineni sebezuzile, ku2019, inhliziyo yamandla Tunisian. Ungabakhipha kanjani ngentando yeningi? Kuzothatha isikhathi esingakanani? Mhlawumbe iminyaka.
ITunisia ingahle ifane nelinye lalawo mazwe aseMpumalanga Ephakathi achitha isikhathi sawo ezingxabanweni zangezikhathi zasendulo
Ngokuzinikela kwakhe okuyiRached Ghannouchi njengoMongameli woMkhandlu, iTunisia isibuyiselwe yikhulu leminyaka; sesiphenduke, noma kungenzeka ukuthi, sifane nelinye lalawo mazwe eMpumalanga Ephakathi abuyela emuva sibubona emuva nosuku lwabo abachitha isikhathi sabo ezingxabanweni zangezikhathi zasendulo.
AmaSulumane Tunisia futhi ukuqeqeshwa kwabo Ennahdha sikhombisile kuyo yonke le minyaka eyisishiyagalolunye eyedlule ukuthi bebengenabo ababusi abakwazi ukuphatha izwe lanamuhla. Ngabe azikhuphulanga ngokungacabangi isibalo sabasebenzi bakahulumeni nabezinhlaka zomphakathi ngokuqasha amashumi ezinkulungwane zabasebenzi bakahulumeni, behlisa isithunzi ukuphatha kanye nokwenza isabelomali sombuso singalingani? Abazange basiphindaphinde yini isikweletu sezwe, silethe ezingeni elingabekezeleleki? Azikukhuthazi yini ukwehla kwamandla emali nokungasebenzi, ubuphekula nenkohliso?
Okubaluleke nangokuthi, azange yini zibuse iTunisia, izolo izimele, izifiso kanye nokufisa kukaRepep Tayyip Erdogan, ophupha ngokuphinda abuyele eTurkey umbuso? Labo abahlushwa ukuphazanyiswa kweTurkey ezindabeni zaseTunisia futhi abanamandla wokuthola izindlela ezinenhlamba zalokhu kuphazanyiswa kufanele bazise ubulungiswa bezwe labo.
AmaSulumane amaTunisia kanye nokuqeqeshwa kwabo u-Ennahdha baphakathi kwabo abantu ababalulekile nabafuna izwe. Ngakho-ke zinendawo yazo enkundleni yezepolitiki yezwe. Kepha okwamanje, kokuphikisayo, hhayi ngamandla, noma kungamandla anamandla okuthonyela isikhulu noma ukumelana nakho ngempumelelo.
Ukuziphatha kwabo kule minyaka eyisishiyagalolunye edlule kanye nama-shenanigans abo okhetho ngemuva kwezinsuku ezisanda kwedlula, ezaziwa noma ezisolwa ngabaseTunisia, kuqinisekisa kakhulu umuzwa wokubuka okuhle: iTunisia ibingaba ngcono uma ibuswa ngaphandle kwabo.
Kepha uMkhandlu osanda kukhethwa ubonakala sengathi unqume, ukuze kube lula, ukuthatha indlela ehlukile. Njengalowo owandulela yena, uzozama ukubusa no-Ennahdha, mhlawumbe nangaphansi kokuqondisa kwakhe. Konke kuyenzeka, maye, sengathi sithathe okufanayo ukwenza amaphutha afanayo futhi siholele izwe ekwehlulekeni okufanayo.
Uhlelo olusha lwezepolitiki - olunalo igama kuphela futhi - lugijimela ekuhlulekeni okuhleliwe. Amandla wangaphambilini - Umhlangano, uMongameli kanye neNhloko Kahulumeni - ulahlekelwe yiminyaka emihlanu iTunisia futhi wayiqhubekisela phambili ekuthembekeni kwezomnotho nakwezimali.
Kubukeka kungakholeki kimi ukuthi okuwukuphela kwenguquko yangempela yilowo ongumongameli omusha
Angicabangi ukuthi izwe lizokwazi ukuxhasa i-quinquennium yesibili ngeze, nokuthi amaTunisia azoba nesineke sokulinda kuze kube yilapho abesifazane nabosopolitiki babo bebona ukuthi bathathe indlela embi. Ngakho-ke sizokuya emswaneni esidumele nge-quinquennium heckled. Kunoma ikuphi, kubukeka kimi sengathi kungenzeka ukuthi ukhetho lokushaya umthetho alwenzi ushintsho, ukuthi isikhathi seminyaka emihlanu edlule siyabuyiselwa futhi ukuthi ukuphela kwenguquko yangempela kukhawulelwe kulowo kamongameli omusha.
UKaïs Saïd wakhethwa njengoMongameli ngabaseTunisia abafisa ukuguquka; bafuna lolu shintsho lube ngeqiniso, lujulile futhi lusheshe. Ngeke bavume neze - futhi hhayi iminyaka emihlanu nganoma yisiphi isimo - ukuthi uhlelo abenqabile luzophinda benziwe kabusha. Futhi ukuthi wenziwe samuntu nguRached Ghannouchi.
I-Algeria: UGeneral Gaïd Salah uthokozela "i-drive ethandwayo" okhethweni lukamongameli - JeuneAfrique.com
I-DRC: ubani uFelix Tshisekedi ambone eParis? - I-YoungAfrica.com
Iphephandaba le-8 likaDisemba 10 2019 - VIDEO
EN DIRECT: Le manager du Real Madrid, Zidane, donne un presseur d'avant-match avant le test de Bruges – VIDEO
Isivumelwano se-Amazon sosuku olulodwa ku-Crest 3D imivimbo emhlophe kuzokukwenza umamatheke - BGR